Wakiilka Paul Pogba ee Mino Raiola oo la hadlay kooxda Barcelona – Gool FM
Wakiilka Paul Pogba ee Mino Raiola oo la hadlay kooxda Barcelona
(Yurub) 14 Luulyo 2018. Wakiilka xidiga khadka dhexe kooxda Manchester United Paul Pogba ee Mino Raiola ayaaa u bandhigay Barcelona saxiixa xidiga laacibka reer France.
Sida laga soo xiganayo “Mundo Deportivo” ee gobolka Catalonia Mino Raiola ayaa u xaqiijiyay kooxda Barcelona in Pogba uu doonayo ka tagista kooxda reer England.
Mino Raiola ayaa tilmaamay in Pogba uusan ku faraxsaneen in Jose Mourinho uu kala shaqeeyo kooxda Red Devils.
Mundo Deportivo ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in Mino Raiola lagu dhex arkay magaalada Barcelona iyadoo aan laga war qabin sababta uu u joogay maalmihii lasoo dhaafay, balse uu maamulka kooxda Blugarana kala hadlay arintan.
Si kastaba Mino Raiola ayaa horey u sheegay in Pogba uu si aad ah ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka kooxda Barcelona isla markaana uu xiiseenayo inuu u dhaqaaqo. kadib marka uu sii xumaaday xiriirka kala dhexeeyay macalinka kooxda Man United ee Jose Mourinho.
Ma Maqashay Nasiib Xumada qabsatay Weeraryahanka Croatia?…(48-saacadood Kaddib ayuu xulkiisa ciyaarayaa Final ka Koobka Adduunka isna….!)
Kylian Mbappe oo Cagta Saaray Dhabihii Pele Isagoona Noqday Da’yarkii….?